Iche na n'ime afọ iri na-abịanụ, a ga-etinye ụgbọala na ekwentị mkpịsị aka zuru oke kwadokwara ọkpụkpọ òkù eziokwu na-adọrọ mmasị. M na-eji igodo iji nweta ebe ọ bụla n'ụgbọala m na enweghị ike ichere ruo mgbe ihe ngosi na-esi na obere ihuenyo na ngwaọrụ mkpanaka m ma ọ bụ ihuenyo igodo ụgbọ ala m… gaa n'ihu na windo windo m nke na-eme ka m lekwasị anya n'ịkwọ ụgbọala kama ileghachi azụ gaa n'ihu. Ppingmepụta adreesị na ozi ndị ọzọ dị oke egwu dị mma iji chee.
Banyere ịzụ ahịa, ejighi m n’aka na ọ ga - abụ nnukwu ahịa dị ka ọtụtụ kwenyere. Echere m banyere eziokwu dịwanye elu dị ka ihe gbasara ahụmịhe onye ọrụ na atụmatụ aka, ọ bụghị ngwá ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozi. Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike ịdị jụụ ịga site na nkọwapụta ngwaahịa na saịtị ma ọ bụ ibe iji nwee ike ịhụ ebe ngwaahịa dị n'akụkụ. Ma ọ bụ iji si na ozi gaa mmekọrịta mmekọrịta. Ebe ọ bụ na ọ dị ọhụrụ, teknụzụ dị jụụ, ụlọ ọrụ ndị na-etinye ya taa na-ahụ ụfọdụ nsonazụ dị ịtụnanya. Ka ọ na-abanyewanye, anaghị m n'aka na ọ ga-adịgide. Enwere m ike ihie ụzọ.
Tags: ar ahịakwadokwara ọkpụkpọ òkù eziokwuaurasmaụgbọalaacha uhie uhieiko googlennenwetaụlọ ọrụ kallocihuenyoahia armetaionokia obodo lensqualcomm vuforiaekwentịmmikpu kpam kpamUkpeneịdị ọkụzappar